Dambiilo cajiinka Easter-ka Dareenka farshaxanka - fikradaha guriga iyo beerta
Dambiilo cajiinka Easter-ka
19.03.2014 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Fikradaha Guriga, Recipes, Cuntada Easter
Dambiilo jilicsan oo cajiin ah waa hab soo jiidasho iyo qurux badan oo loogu adeego ukunta iyo ukunta. Qurxinta macnaha leh ee miiska dabbaaldegga, oo aad ugu adeegi karto saladh, hilib cunto, saxanno kala duwan.
Gashadaan dambiiloodku waa geedi socod aad u adag, laakiin aad bay ugu habboon tahay Ciidda Kirismaska ​​iyo diyaarinta ukunta la qurxiyey. Siyaabo badan ayaa loo sameeyaa, laakiin asal ahaan dhammaantood waxay ku tiirsan yihiin qaabka markab kale.
Alaabta loo baahanyahay:
- Cajiinka Ikhtiyaariga ah - mabda 'ahaan, suugada ayaa ku habboon maadama aysan badin marka la dubayo, laakiin tani waxay sidoo kale quseysaa qaar ka mid ah cajiinka khamiirka khamiirka iyo qaarna pizzas.
- Weel weelal qafiif ah oo qaabayn doona dambiisha.
- Dufan - khudrad kasta ama xayawaan kasta ayaa ku habboon.
- Ukun jabtay oo leh laba qaado biyo - si loo faafo.
- Aluminium-ka waraaqda ah ama warqad dubista, oo la siiyay in cajiinka cajiinka uusan toos toos ugu ahaan karin digsiga.
- Cadayga ilkaha si ay u sugaan qaar ka mid ah noocyada xarig ama xakamayn, haddii aad mid bixisay.
Is dabajoogaan leydi ah dhumucda la doonayo oo gooya jarooyinka ku habboon. Dabaqadda dusha sare u rog dhinaca, ku dabool waraaq ama warqad sidii loogu baahnaa, oo si taxaddar leh dufanka oo dhan saar. Googooyaa bur cajiin ah salka saliida adoo adeegsanaya qaab la xushay, si taxaddar leh goynta geesaha aan loo baahnayn oo aad dib u rogi karto. Ku adkeyso cadaadis, oo haddii taasi aysan ku filneyn, ku xafid cadayga. Waxa kale oo aad ku dari kartaa qaddarka hal abuurka adiga oo gooya qaababka baastada (tusaale ahaan, qaab-caleen ah). Markii digsiga oo dhan la daboolo, hoos u dhaadhac xagga sare, ie. oo loogu talagalay hoosta hoose inay ahaato xitaa, ku luqluug ukunta la garaacay oo ku rid foornada 180 ° C illaa 220 ° C (waxay kuxiran tahay cajiinka) foornada. Dubo ilaa brown dahabka. Haddii aad rabto, isku diyaarso oo dhig santuuqa dambiisha isbarbar dhig. Waxaa lagu keydiyey iyadoo la kaashanayo cadayga markii dambiilku qaboobo. Tani way aad uga adag tahay cajiinka soodhada. Ka bax saldhiga, u oggolow inaad qaboojiso oo aad diyaar u tahay fasaxa ciida. Haddii aadan qorsheyneynin inaad u adeegto gudaha saacadaha 24 ee xiga, ka dib markaad qaboojiso, waa inaad dambiisha ku rid baqshad.
abaabul, Dambiil Easter, Dambiilo ciidaha, Dambiilo cajiinka Easter-ka, fikradaha, fikradaha guriga, Fikradda Ciidda Masiixiga, dambiil, Dambiilo ciidaha, dambiilood oo cajiin cajiinka, dambiilood oo ukunta, dabo jajaban, Cuntadani Easter, karinayo dambiilood, cuntada sida loo kariyo, cajiinka cuntada, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Qaab casri ah oo gudaha ah
Waa maxay sida saxda ah waa nooca canab ee qaabeynta gudaha. Qaabka Cunidda ...
Pizza asalka ah iyo macaan
Pizza waa wax fudud oo dhaqso badan si loo diyaariyo cunno la adeegi karo oo mac ...
Jikada oo leh walxo buluug ah
Haddii midabka buluuga ahi yahay daciifnimadaada, ka dib waxaad xaqiiqdii ubaahan doontaa inaad gasho gudaha ...
Naftaada u samee miis fadhiga
Miyayn ka dhigi karnaa miis jannad ka dib marka heerkulku kaco ...
Qurux iyo qurux
Fikradaha guriga iyo beerta. Fikradaha xiisaha leh ee qurxinta guriga iyo naqshadeynta. Loogu talagalay kuwa jecel ...
Boorso shaashadiisi hore ku jirtay boorso qurux badan
Tani waa fikrad si fudud loo hirgalin karo oo muujineysa sida loogu rogayo shandad duug ah waxna ...
Ukunta ukunta Easter
Midabaynta ukunta iyo qurxinta Ciidda Kirismasku mararka qaar way ka baxsan karaan kuwa caadiga ah iyo ...
Soosaarista saqafyada dhagaxyada ayaa ka mid ah hababka ugu da'da weyn iyo waqtiga la tijaabiyay ee dhammaystirka ...